डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै बीपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरु सडकमा - हिपमत
डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै बीपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरु सडकमा
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकहरुले बुधबार प्रदर्शन गरेका छन् । १९ औं अनशनको २४ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले बेवास्ता नगर्दा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको भन्दै उनीहरुले जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई दबाब दिन सडकमा उत्रनु परेको बताएका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी एक चिकित्सकले भने, ‘त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शय्‍यामा अनशनरत डा केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै हामी चिकित्सकहरु सडकमा उत्रिएका हौं ।’